The Ab Presents Nepal » खुसिको खबर,युएईबाट एक सय ४८ नेपाली लिएर उड्यो पहिलो ‘उद्धार’ जहाज !
खुसिको खबर,युएईबाट एक सय ४८ नेपाली लिएर उड्यो पहिलो ‘उद्धार’ जहाज !
युएई- कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण युएईमा समस्यामा परेका एक सय ४८ जना नेपाली आज नेपाल फर्किएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको आरए(२२९२) को पोहिलो ‘उद्धार’ उडानमार्फत एक सय ४८ जना आज नेपाल फकिएका हुन् ।उडान तालिका भन्दा चार घन्टा ढिलो गरि स्थानिय समय अनुसार बिहानको ५ः१० बजे दुबईबाट उडेको थियो । जहाज १ बजेर २५ मिनेट जाँदा उड्न पर्ने थियो।